कसरी राम्रोसँग स्प्याम सन्देशहरू फिल्टर गर्ने - Semalt विशेषज्ञबाट सुझावहरू
इभान कोनोवालोभ, Semalt विज्ञ भन्छन् कि Gmail स्प्याम फिल्टर अहिले सम्मको एक उत्तम स्प्याम फिल्टरिंग एल्गोरिदम मानिन्छ। यसले तपाईंको इनबक्समा जंक मेलहरू र अर्थहीन सन्देशहरू बेवास्ता गर्न मद्दत गर्दछ। जीमेल सब भन्दा राम्रो र सबैभन्दा ठूलो ईमेल सेवा प्रदायक हो जुन विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्याको साथ छ। औसतमा, दुई अरब मानिसहरूले जीमेललाई उनीहरूको प्राथमिक ईमेल आईडीको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। २०० 2004 मा सुरू गरिएको, जीमेलले समयको साथ आफैलाई सुधार गरेको छ र स्प्याम ईमेलहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि हामीलाई केही उत्कृष्ट फिल्टरहरू प्रदान गर्न सुरू गर्दछ। यसको एक सुविधाहरू जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्दछ यसको साँच्चिकै महान स्पाम फिल्टरि capabilities क्षमताहरू हुन्। केवल रेडिफ, एमएसएन, र याहू जस्तै जीमेलले हामीलाई स्पाम सन्देशहरू रोक्न र ट्र्याश क्यानको स्पाम फोल्डरमा पुनर्निर्देशित गर्न सजिलो बनाएको छ।
जीमेल स्प्याम फिल्टर के हो?
जीमेल स्प्याम फिल्टर बर्षको तुलनामा राम्रो र सुविधाजनक भएको छ। किनकि यसले हाम्रो लागि स्प्याम सन्देशहरू रोक्न सजिलो बनाउँदछ, हामीले यसको क्षमताहरू र सुविधाहरू जाँच गर्नुपर्नेछ यो निर्णय गर्नु अघि यो हाम्रो व्यापार ईमेलहरूको लागि राम्रो हो कि होइन। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, फिल्टररीसन भनेको प्रक्रिया हो जुन बेकार र अनौंठो चीजहरूलाई फिल्टर गर्दछ, के उपयोगी र राम्रोको पछाडि छोड्दै। उही तरीकाले, जीमेल स्प्याम फिल्टरले जंक सन्देशहरू र ईमेलहरूमा श susp्कास्पद लिंक वा संलग्नकहरू क्रमबद्ध गर्दछ।
के कारण यसलाई अनौंठो बनाउँदछ तपाईंको ईमेलहरू र सन्देशहरू प्रबन्ध गर्दछ। प्राय जसो, प्रयोगकर्ताहरूले संदिग्ध ईमेलहरूलाई मेनुअल्ली मेट्न आवश्यक पर्दैन किनकि जीमेलको स्प्याम फिल्टरले तपाईंको सट्टामा काम गर्दछ। अझै पनि, यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि एक ईमेल वा प्रेषक संदिग्ध छ, तपाईं केवल आफ्नो जीमेल खातामा फिल्टर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र भविष्यमा ईमेल वा सन्देशहरू रोक्नको लागि त्यो ईमेल फिल्टरमा थप्न सक्नुहुन्छ।
Gmail स्प्याम फिल्टरहरू:
ब्ल्यान्ट ब्लकरले प्रयोगकर्ताहरूलाई मैन्युअल तरिकाले स्पाम मेटाउन सक्षम गर्दछ, तिनीहरूको वेबसाइटहरूको बाउन्स रेट बढाउँदै। यसले स्प्यामरहरूलाई तपाईंलाई बेकारको सन्देशहरू पठाउन पनि रोक्दछ।
थोक ईमेल फिल्टरले काम गर्दछ जब तपाईं उही प्रेषकबाट ईमेलको एक ठूलो संख्या प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसले आक्रामकताको आधार स्तरहरू सेट गर्दछ र नियमित आधारमा स्प्याम फिल्टर गर्दछ।
Gmail को कोटी फिल्टरहरूले विशेष स्पाम प्रकारको सन्देशहरू फिल्टर गर्न मद्दत गर्दछ जसमा विशेष सामग्री समावेश हुन्छ जस्तै ईमेल अनुलग्नकहरू, छविहरू, यौन सामग्री, र जुवा साइटहरूमा निमन्त्रणा।
नल प्रेषक विस्थापन यसले स्वचालित रूपमा प्रेषकहरूको आईपी ठेगानाहरूलाई रोक्दछ जुन तपाईंलाई दिनहुँ धेरै बेकार सन्देशहरू पठाउँदै थियो।
जीमेल फिल्टर कहिले लागू हुन्छ?
भाग्यवस, Gmail स्प्याम फिल्टरहरूले निरन्तर तपाईंको सन्देशहरूको परीक्षण गर्दछ जुन तपाईंको इनबक्समा अवस्थित छ। उदाहरण को लागी, जब एक न्यूजलेटर सदस्यता तपाईलाई दैनिक ईरिट गर्दछ स्प्याम श्रेणी फिल्टर लागू हुन्छ। तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुनेछ कि कसले तपाईंलाई सन्देश पठाउनु पर्दछ र कसले हुँदैन। यदि केसमा तपाईले यी कुनै पनि सेटि adjustहरू समायोजन गर्नुहुन्न, Gmail को स्पाम फिल्टरहरूले उनीहरूको कार्यमा रहनेछ, तपाईंलाई ईमेलको उत्तम अनुभव प्रदान गर्दछ।